इन्स्टाग्राममा आलियालाई १५ लाखले अ,न्फ,लो गरे ? – Jagaran Nepal
इन्स्टाग्राममा आलियालाई १५ लाखले अ,न्फ,लो गरे ?
सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम कलाकारको लोकप्रियता मापन गर्ने स्थान पनि हो । इन्स्टाग्राम अहिले कलाकारका लागि आफ्नै दैनिक गतिविधी जानकारी गराउने स्थानदेखि चलचित्रको प्र,चा,र गर्ने, राम्रो माध्यम बनेको छ ।तर, सामाजिक संजालमा कलाकारले जति तारिफ पाउँछन्, गा,,ली पनि उत्तिकै पाउने गरेका छन् । नायक सुशान्त सिंह राजपुतको नि,ध,नपछि त बलिउडमा परिवारवादको बहस नै सुरु भएको छ ।
यो बहसमा सबैभन्दा बढी आलोचित नायिका आलिया भट्ट भएकी छिन् । आलियालाई अहिले सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा अनफलो गर्ने लहर नै चलेको छ ।करिब ५ करोड फलोअर्स नजिक पुगेकी आलिया अहिले आलोचनाको शि,का,र बनेकी छिन् । उनलाई इन्स्टाग्राममा अनफलो गर्नेको संख्या १५ लाख पुगेको छ ।
४ करोड ८९ लाख फ्यान कमाएकी आलियालाई अहिले १५ लाखले अनफलो गरिसकेका छन् । अहिले उनको इन्स्टाग्राममा फलोअर्सको संख्या ४ करोड ७४ लाख छ । सुशान्त सिंह राजपुत बलिउडमा व्याप्त परिवारवादको कारण डि,प्रे,शनमा गएको र आ,त्म,ह,त्या गरेको भन्दै उनका फ्यानले करण जोहर, आलिया भट्टको चर्को आ,लो,चना गरिरहेका छन् ।